Marka gadhku ka soo bixi waayo ragga - Talo iyo daryeel shakhsi ah | Ragga Stylish
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed
Waxaa jira rag daneeya muuqaalka gadhka, waana taas sababta ay ugu dhacaan dhibaatooyin sida koritaanka gadhka oo aan caadi ahayn, ama laga yaabee timo la'aanta meelaha qaarkood sida dhabannada ama garka ama weli si xun, in gadhku aanu jirin, si dhib leh wax u soo baxaan. Waxaa jira sababo badan oo gadhku uusan ugu soo korin ragga taasna ay quus ka taagan tahay kuwa runti raba inay helaan.
Kahor intaadan quusan ama aadan u dhaqaaqin xalka adag, Waa inaad ogaataa ugu yaraan sababaha keeni kara dhibaatadan. Waxaa jira arrimo badan oo sababi kara maqnaanshahan: da'da, hiddo-wadaha, hormoonnada, qaab nololeedka ... wax kasta oo yar ama weynba way saameyn ku yeelan karaan waana taas sababta aan ugu qasban nahay inaan waqti yar qaadno si aan u ogaanno.
1 Muxuu gadhku ugu soo baxaa ragga?
2 Waxyaabaha hor istaaga koritaankiisa
3 Ma jiraa xal in gadhka la beero?
4 Daawooyin badan oo guriga iyo dabiici ah
5 Xakamee inbadan oo noloshaada ah
Muxuu gadhku ugu soo baxaa ragga?
Markuu ninku la kulmo marxaladdiisa qaangaarnimo, jirkiisa waxaa loo beddelaa qubeys hormoonno ah, oo mas'uul ka noqon doona muuqaalka sifooyinka galmada. Isbeddelkan waxaa ka mid ah kordhinta murqaha, lafaha adag iyo muuqaalka timaha jirka. Hormoonkaas wuxuu ka mid yahay hormoonada ugu badan ee ka muuqda isbadalkan, wuxuu kaa caawin doonaa inuu dhaqaajiyo soo-dhoweeyaasha xididdada jirka oo taas macnaheedu yahay wajiga iyo quruxda jirka oo badan.
Laakiin xitaa qaan-gaarnimada, macnaheedu maahan inuu gadhka soo muuqan doono habeennimo.. Muuqaalka ugu horreeya badanaa waa dhif, oo leh timo fiican oo timaha aad u kala fog, xitaa wuu gaari karaa da'da 20 mana haysto wax uun. Xitaa waxaa jira rag aan awood u lahayn inay yeeshaan gadh adag oo is haysta illaa ay ka gaadhaan 30 jir. Laakiin xitaa saadaalinta dhammaan faahfaahintaan wali waxaa jira faahfaahin dheeraad ah oo abuuri karta maqnaanshahan.
Waxyaabaha hor istaaga koritaankiisa
Da'du waa mid ka mid ah waxyaabaha sababi kara koritaankooda laakiin lhiddo-wadaha ayaa laga yaabaa inuu ka mid yahay kuwa ugu caansan. Tani waa in la sharaxo in DNA-da ay ka ciyaareyso doorkeeda ugu muhiimsan, maadaama laga soo bilaabo dhalashadaada saadaashaada ayaa calaamadeyn doonta nolosha. Tirada duubabka timaha ee maqaarka ayaa go'aamin doona in gadhka uu ka badan yahay ama ka yar yahay.
Iyaga ayaa ah qodobka muhiimka u ah horumarka guud ee gadhka duurka. Hormoonkaas waa hormoonka mas'uulka ka ah astaamaha lagu garto astaamaha ragga, laakiin la dihydrotestosterone Waa mid ka mid ah noocyadeeda, kaas oo xakameynaya koritaanka timaha si aad u wanaagsan. Waxaa jira meydad aan u dulqaadan karin macluumaadka hoormoonadan si wanaagsan, sidaa darteed ma laha koritaan aad u xakameysan oo isku mid ah ragga qaarkood.
Ma jiraa xal in gadhka la beero?
Marka la eego rabitaanka xirashada gadhka ama isku dayga in kor loo qaado korniinkisa, waxaa jira rag doorta daawooyinka dabiiciga ama alaabooyinka la kulmi kara filashooyinkooda.
Nadiifinta wajiga iyo gadhka. Maydhista wejigaaga maalin kasta ayaa kaa caawinaysa ka saarida wajiga unugyada dhintay, marka lagu daro nadiifinta timaha godadka. Tani waxay ka caawin doontaa gadhka inuu aad u sii kordho oo uu xoog yeesho. Waxaa jira shaambooyo loo sameeyay koritaanka timaha sida "Shaambo Gadhka iyo Timaha" oo ay ku jiraan isku dar saliid dabiici ah iyo mid dabiici ah oo dhaqaajisa koritaankooda.
Codsiga alaabada caanka ah. Minoxidil waa mid ka mid ah waxyaabaha ka caawiya koritaanka timaha, hantideedu waxay ka caawisaa koritaanka timaha maaddaama ay dhaqaajinayaan jiritaanka timaha.
Beerista timaha ayaa ah xalka ugu macquulsan, qalliinka iyo ku-tallaalida timaha madaxa ayaa loo dhaafay heerar kale, iyadoo lagu tijaabinayo codsigiisa xitaa wajiga si kor loogu qaado timaha meelaha qaarkood. In kasta oo aan hore u ogaanay in faragalintani ay ku jirto gacanta dadka awooda dhaqaale.
Daawooyin badan oo guriga iyo dabiici ah
Waxay ku jirtaa suuqa saliidaha gaarka ah si loo baabi'iyo cuncunka iyo xoqida habkanna waxay ka caawinaysaa inay si fiican u qoyaan maqaarka ku xiga gadhka. Waxaad ku arki kartaa casharkaan tilmaamaha ugu fiican ee aad ku xanaaneyso gadhka.
Caday gadhka si joogta ah, ficilkani wuxuu ka caawinayaa inuu dhaqaajiyo wareegga xididdada timaha garka waxayna kobciyaan koritaankooda. Waa inaad ku sabirtaa cuncunka ugu horreeya inta lagu jiro koritaankiisa bilowga ah, laakiin cadayashada waxay ka dhigeysaa mid kora oo deganaada si caadi ah.
Xakamee inbadan oo noloshaada ah
Horta waa si sax ah wax u cun oo cun cunto isku dheellitiran. Cunnooyinka hodanka ku ah fiitamiinnada B, B9, C iyo Zinc ayaa ah kuwa ugu fiican ee lagu kiciyo heerka testosterone.
Nasasho ku filan hel tan iyo kororka testosterone wuxuu dhacaa inta lagu jiro hurdada REM. Waa inaad seexo celcelis ahaan 8 saacadood maalintii si aad u dhammaystirto wareegga nolosha ee jirkaaga oo dhan, haddii aad huruddo nus saacadood tilmaamayaashaaga hormoon waxaa loo dhimayaa nus.
Dhaqanka isboortiga maadaama jimicsi sidoo kale la muujiyay waxay kicisaa wax soo saarka testosterone. Dhaqdhaqaaqa, wareegga ayaa la dhaqaajiyaa tanna waxaad ku tusi doontaa muuqaal aad uga wanaagsan maqaarkaaga, tan iyo waxaad quudataa godadka timahaaga si ka sii badan. Isboortiga waxaad sidoo kale kaa caawineysaa yareynta dufanka jirka, oo mas'uul ka ah kor u qaadista heerarka estrogen.
Ka fogow diiqadda. Jidh culeys badani saaran yahay wuxuu qariyaa cortisol, hormoon yareeya wax soo saarka testosterone. Isku day inaad kordhiso cuntadaada isticmaalka fiitamiin C, maxaa yeelay waxay ka caawin doontaa kor u qaadista heerarka cortisol ee hooseeya. Waad akhrisan kartaa sida kor loogu qaado isku-kalsoonaanta ama aragti abuur leh si ay kaaga caawiso xakameynta shucuurtaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Marka gadhku ragga ku soo bixi waayo
Tilmaamaha Blonde ee ragga